WD My Cloud Home, Falanqaynta NAS-Bilaasha Dhibaatada | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan ku jirnaa xilligii uu kaydinta daruuraha xukumi lahaa. Waxaan aad iyo aad ugu isticmaalnay inaan u dirno dukumiintiyadayada, sawiradayada iyo dhamaan noocyada feylasha ee keydkeena daruuriga ah ee aan jecel nahay, ha ahaato Google Drive, iCloud, Dropbox ama waxkasta. Laakiin sidoo kale waxaa jira ikhtiyaar aad ku abuuri karto daruurahaaga shaqsiyeed, iyada oo aan ku xirnayn dhinacyada saddexaad, taasna waxaa jira NAS.
Jebinta fikradaha fikradaha ah ee ah in NAS-kan kaliya loogu talagalay khubarada kakanaanta kakanaanta, WD waxay na siisaa gurigeeda cusub ee My Cloud Cloud, saxannada ku xiran shabakada ee loo qoondeeyey dhowr daqiiqo oo ku siinaya suurtagalnimada inaad ku raaxeysato faylashaada meel kasta iyo xitaa rakib Plex si aad ugu raaxeysato waxyaabaha aad ka kooban tahay. Markii aan isku dayay ka dib waxaan isku qanciyay inay tahay uun wixii aan u baahnaa, waana kuu sheegi doonaa sababta.
1 Waa maxay NAS?
2 Caddaymaha WD My Cloud Home
3 Qaabeynta My Cloud Home
4 Barnaamijyada loogu talagalay macruufka iyo macOS
5 Ku rakibidda Plex ee loogu talagalay waxyaabaha ku jira warbaahinta badan
6 Xaddidaadaha u baahan in wax laga qabto
Waa maxay NAS?
NAS waa soo gaabinta Shabakadda Ku Xidhan Shabakadda. Kuwa aan garanayn waxa aan ka hadlayo, ama kaliya eraybixintan yaqaan, waa disk adag (ama dhowr) in waxay ku xiran yihiin shabakadaada si ay uga heli karaan aaladaha gurigaaga, iyo xitaa banaanka. Iyagu waa "kaydintaada daruurahaaga shaqsiyeed", maaddaama meel kasta oo aad internetka ku leedahay aad ku raaxeysan karto wax kasta oo ku jira NAS-kaaga.
Dunida NAS waa mid aad u adag, oo leh moodooyin iyo qiime aan la tirin karin iyadoo kuxiran fursadaha ay ku siinayaan. Laakiin waxaan ku soo koobi karnaa inay dhahaan waa kumbuyuutarro yaryar (xoog ama ka awood yar, iyadoo ku xiran qiimaha) taas oo ay ku jirto xitaa waad rakibi kartaa codsiyada sida Plex ama Torrent macaamiisha, si aad u soo dejiso waxyaabaha aan u baahnayn kombuyuutar maalintii oo dhan shaqeeya. Adoo awood u leh inaad marin u hesho feylashaada meel kasta, waxaad xitaa ka ciyaari kartaa taxane ama filimaan aad ku hayso NAS-kaaga meel ka baxsan guriga, ilaa iyo intaad leedahay xiriir internet kuu ogolaanaya.
Caddaymaha WD My Cloud Home
Muuqaalkeedu kama duwana kan dirawallada caadiga ah ee caadiga ah, in kasta oo uu ka yara weyn yahay. Western Digital ayaa bilic ahaan ugu cusbooneysiisay muuqaal casri ah oo caqli badan, halkaas oo kaliya LED-ka dhexe uu muujinayo inay daaran tahay iyo inuu si sax ah u shaqeynayo. Waxaa lagu heli karaa awoodo kala duwan, laga bilaabo 2 illaa 16TB (ikhtiyaarka laba saxan), iyo inuu noqdo wado adag wuxuu leeyahay astaamo ka geddisan kuwan: ma lahan xiriir USB ah.
Dhabarka waxaan leenahay xiriirka Ethernet kaas oo aan toos ugu xireyno diskigeenna routerka, maxaa yeelay waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aan u helno waxyaabaha aad ka kooban tahay. Sida iska cad sidoo kale waa lagama maarmaan in la isku xiro korontada, in kastoo aad arki karto isku xiraha USB gadaashiisa, markii aan idhi ma haysto, waxaan ula jeeday in aan loo isticmaalin in lagu xiro kumbuyuutar kasta. Waa USB in lagu xiro disk kale (oo sidaasna lagu balaadhiyo) ama lagu xiro xusuusta USB-ga sawirro ama faylal si toos ahna loogu soo dejiyo diskiga.
Dekedda Ethernet waxay u oggolaaneysaa wareejinta xawaare gaaraya 1000Mbps, diskkuna wuxuu leeyahay 1GB RAM. Processor Realtek Quadcore ayaa mas'uul ka ah maareynta dhamaan howlaha diskiga. Qof kasta oo xirfad ku leh farshaxanka wuxuu ogaan doonaa inay tahay NAS khaas ah qeexitaannadaTaasi waa sababta maqaalka loogu magac daray "ku habboon qof walba." Goor dambe ayaad ogaan doontaan sababta aan sidaas u leeyahay.
Qaabeynta My Cloud Home
Waxay ku saabsan tahay aasaasiga sida fur iyo ciyaar. Adoo si toos ah ugu xiraya Ethernet router-ka uma baahnid inaad siiso fursad uu ku helo shabakadaada, iyo qalab kasta oo ku xiran WiFi-gaaga waxaad ku habeyn kartaa dhowr daqiiqo marinka shabakadda My Cloud Hello. Gali dhowr lambar oo diyaar u ah inaad tagto, taas oo fudud oo dhakhso leh waxaad yeelan doontaa NAS-kaaga si dhammaystiran loogu qaabeeyey inuu kula shaqeeyo.
Si aad u aragto waxa ku jira oo aad u habeyso inta ka hartay howlaha NAS, waxaad u baahan doontaa dalabka macruufka y macOS (sidoo kale waxaa laga heli karaa Windows iyo Android). Qaabeynta ayaa ah wax iska fudud maadaama fursadaha la bixiyay ay yar yihiin: ku dar isticmaaleyaasha diskiga, isku hagaaji tallaabooyinka amniga sida lambarka sirta, Aqoonsiga Taabashada ama Aqoonsiga Face si aad u hesho barnaamijka una dhaqaajiso nuqul otomaatiga ah ee sawirada iyo fiidiyowyada ka socda iPhone-gaaga NAS. Wixii wanaagsan iyo kuwa xunba, ma jiraan fursado badan oo habeyn ah oo ku saabsan gurigeyga My Cloud.
Barnaamijyada loogu talagalay macruufka iyo macOS
Sidaan soo sheegnay, faa iidada ugu weyn ee NAS ayaa ah inaan awoodno inaan kahelo waxyaabaha kujira meelkasta oo aan kaheleyno internetka, iyo waxaan ku guuleysan doonnaa tan mahadsanid codsiyada oo aan horay uga wada hadalnay oo aan siinay xiriiriyeyaasha soo dejinta.
Codsiga MyCloud ee macruufka ayaa noo oggolaan doona inaan eegno dhammaan waxyaabaha ku jira NAS. Waxay noqon doontaa sida sahamiyaha faylka oo aan ku arki karno sawirro, fiidiyowyo, dukumiintiyo ... kuna furan karno barnaamijyada kale, kula wadaagi karno barnaamijyada farriimaha ama aan ugu soo dejisanno aaladdayada Intaa waxaa dheer waxaan sidoo kale u habeyn karnaa keydka duubkeena, si dhammaan sawirada iyo fiidiyowyada aan ku qaadanno iPhone-kayaga si toos ah loogu soo guurin doono NAS. Haddii aad isticmaasho maktabadda iCloud, sawirrada loo guuriyey NAS waa kuwa asalka ah, ma ahan thumbnails ee ku jira iPhone-kaaga, taas oo ah war weyn.
Sida sahamiyaha faylka ama keydka, dalabku si fiican ayuu u shaqeeyaa, waa dhakhso oo ku wareejinta waa mid dareen leh. Dib-u-soo-celinta nuxurka maaddooyinka kala duwan ayaa suurtogal ka ah arjiga laftiisa, xitaa waxay kuu ogolaaneysaa inaad doorato tayada fiidiyowga si aad ugu dhigto xawaaraha isku xirkaaga. Waxay hagaajin kartaa bilicsanaanta ama macluumaadka feylasha faylasha badan, laakiin taasi dhib maahan maadaama ay u oggolaaneyso rakibidda Flex, taas oo si la yaab leh u qabata.
On Mac, gurigeygaan daruuriga ah wuxuu u dhaqmaa sida disk kasta oo ku xiran USB-ga kombuyuutarkaaga. Codsiga Discovery WD wuxuu ka dhigayaa inuu ka soo muuqdo desktop-kaaga ama dhinaca dhinaca Finder-kaaga, waadna u furi kartaa sida disk kasta oo deegaanka ah, xitaa haddii aad ka baxsan tahay shabakadda gurigaaga. Is dhexgalka nidaamka waa qumman yahay, waana guul in sidan loo maareeyo maxaa yeelay waa mid aad ugu raaxeysan oo u fudud dhamaan isticmaaleyaasha. Ka soo jiidaya faylasha hal kaydinta mid kale marwalba waa macquul suurtagalnimada isdhexgalka, oo hadaadan haysan kumbuyuutarkaaga oo ay ku rakiban tahay arjiga, ha ka welwelin, maxaa yeelay biraawsar kasta waxaad ka geli kartaa koontadaada Daruurtayda oo arag mawduucaaga.
Ku rakibidda Plex ee loogu talagalay waxyaabaha ku jira warbaahinta badan
Waa maxay NAS oo aan lahayn Plex? Haddii aad rabto inaad u adeegsato si aad u keydiso oo aad u daawato waxyaabaha ku jira warbaahinta badan, waa qasab in la isticmaalo Plex, nasiib wanaagna WD My Cloud Home ayaa kuu oggolaanaya inaad ku rakibto hal guji. Waxba ha sameynin wax la yaab leh, ama ha ku soo degsan faylal qalab rakibid adag leh ... hal guji oo Plex ayaa sugi doona inaad ku darto waxyaabaha aad ka kooban tahay. Sawirro, muusig, filimaan, taxane… waxaad awoodi doontaa inaad si faahfaahsan wax walba uga arki karto kombuyutarkaaga, iPhone, iPad iyo telefishankaaga.
Plex waxaad ku abuuri doontaa server-kaaga multimedia ee aad ku ciyaari karto aalado iswaafaqsan, laakiin waxay leedahay xaddidaadkeeda Faylasha waaweyn, sida filimada qaab mkv ah iyo in kabadan 20GB cabir ahaan, loo maqli maayo mid hagaagsan. Xaddidnaanta Plex ee arrintan la og yahay, iyo Gurigani 'NAS My Cloud Home' awood uma lahan inuu ku ciyaaro fiidiyowyadan, laakiin tani sidoo kale waxay leedahay xal: Nooga.
Haddii aad la socoto 'Plex' waxaad abuureysaa adeegaha 'DLNA server', 'Infuse' waxaad awoodi doontaa inaad ku soo saarto wax kasta oo ay ka kooban tahay dhibaato la'aan hadal haynta. Iyada oo leh barnaamijyo loogu talagalay macruufka iyo tvOS, waa xalka ugu fiican ee fiidiyowyadan culus ee uusan Plex player xamili karin.. Waxa kaliya ee aad ugu baahan tahay inaad ku raaxeysato maktabaddaada waxtarka leh ee loo yaqaan 'multimedia library' waa server-ka Plex oo lagu rakibay gurigaaga daruuriga ah, iyo ku shub qalabkaaga.
Ka sokow Plex tan WD My Cloud Home waxay taageertaa Alexa, IFTTT oo xitaa waxay kuu ogolaaneysaa inaad soo dejiso waxyaabaha aad ka heysato adeegyada kale ee daruuraha sida DropBox ama Google Drive. Barnaamijyadan waxaa loo rakibay sida ugu fudud ee loo yaqaan 'Plex' barnaamijka moobiilka ama kombiyuutarkaaga.
Xaddidaadaha u baahan in wax laga qabto
Waxaan soo bandhignay wanaagga weyn ee uu leeyahay WD My Cloud Home, laakiin sidoo kale waxay leedahay cillado. Warka fiicani wuxuu yahay inay si fudud loogu hagaajin karo cusbooneysiinta softiweerka, sidaa darteed waxaan rajeynayaa WD inay ka shaqeyn doonto taas dhowaan. Mid ka mid ah cilladaha ugu waaweyn ayaa ah inaadan siin karin isticmaale kale marinkiisa diskigaaga. Tan waa in si fiican loo sharaxaa, maxaa yeelay waad sameyn kartaa, laakiin si ay u keydiso feylalkeeda, maahan inay marin u hesho waxyaabahaaga. Waad la wadaagi kartaa faylasha qaarkood dadka kale, laakiin ma wadaagi kartid dhammaan waxyaabaha ku jira saxanka. Haddii aad rabto qof inuu marin u helo, waa inaad rakibtaa arjiga oo aad isticmaashaa koontadaada.
Cillad-darrada labaad waxay la xiriirtaa tan, waana sida ay u fududahay hagaajinta: ma lahaan kartid dhowr miisk My Cloud koontadaada. Rikoor kuma heli karo gurigeyga iyo mid kale oo xafiiskeyga ku yaal, codsigu ma taageerayo. Xalka ay WD bixiso ayaa ah inaad iska diiwaangeliso emayl kale iyo inaad bedesho qadarka markasta oo aad rabto inaad gasho disk, taas oo si saraaxad leh aan loogu dulqaadan karin.
WD My Cloud Home drive waa ikhtiyaar aad u fiican kuwa doonaya NAS oo ah mid fudud oo wax ka qabashada iyo qaabeynta qiime aad u soo jiidasho leh. Wixii ku kacaya kaliya "kiiska" ee NAS caadiga ah, diskkani wuxuu ku siinayaa waxqabad wanaagsan, kalsooni iyo isdhexgal dhab ah oo laga helo macruufka iyo macOS. Awood u lahaanshaha inaad ku abuurto server-kaaga Plex ee loogu talagay waxyaabo badan oo warbaahin ah ama aad si toos ah ugu kaydiso sawiradaada iPhone-ka waa qaar ka mid ah waxyaalaha yar yar ee hufan ee NAS na siinayo. Cilladaha ugu waaweyn ee jira waxay la xiriiraan rukhsadaha isticmaaleyaal fara badan ama cajalado badan, taas oo dhanka kale si fudud loogu xallin karo cusbooneysiinta barnaamijyada. Qiimaha oo u dhexeeya € 150 (2TB) ilaa € 700 (16TB) gudaha Amazon, waa mid ka mid ah NAS-ka ugu jaban ee la iibsan karo.
Naqshad casri ah oo caqli badan
Isku-darka barnaamijyada nidaamka
Si fudud loo isticmaalo codsiyada
La jaan qaadi kara Plex
Awood xaddidan oo lagu ogaan karo faylal culus "mkv"
U oggolaan meyso isticmaaleyaal fara badan oo marin wadaag ah
Ma ogola in saxano badan lagu daro hal koonto
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » WD My Cloud Home, Falanqaynta NAS Hashle-Bilaash ah
Subax wanaagsan, waxaan hayaa labo su'aalood, aan aragno inaad aniga ii xallin kartid? Midda hore waxay tahay haddii diskigan nuqullo ka sameeyo mashiinka waqtiga, ama waa inaan gacanta ku sameeyaa iMac-kayga, tan labaadna waa haddii aan sawiro ka soo dejisan karo kamaraddayda 'reflex camera' oo aan wifi ugu jiro diskiga meel kasta oo leh xiriir wifi ah. aad u badan,
Ku jawaab Igor
Incase wuxuu soo bandhigayaa Gacanta MacBook Pro oo ay ku jiraan Batariga